Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in /customers/0/9/6/barqamaal.com/httpd.www/wp-includes/compat.php on line 502 Mawliidkii Nabi Mohamed (SCW) 2016/12/04 Oo lagu qabtay wadanka Sweden – Barqamaal
Asc: Waxaa magaalada Gothenburg ee dalka Sweden lagu qabtay mawliidkii Nabiga (SCW) habeenkii xalay. Wuxuu ahaa barnaamij aad iyo aad loo soo habeeyey, waxaana halkaas isugu yimid culimo ka kala timid gobolada Sweden oo carab iyo somali ba leh. Waxaa halkaas laga jeediyey muxaadarooyin aad u qiira galiyey muslimiintii halkaas isugu yimid. Dadka wajigooda waxaa ka muuqday farxad aad u balaaran oo aad moodaysid iney aad u sugayeen xuska dhalasha nabigeena (SCW).
Waxaa muxaadarooyinkii lagu xijiyey ducooyin kala gadisan oo loo ducaynayey dadka muslimiinta ah oo dhan iyo dad xanuunsanaa oo soo dalbaday in loo duceeyo. Waxaa ducooyinka markii la akhrinayey la arkayey ilma yar-yar oo si fiican ducada u akhrinayey, sidoo kale dadka waaway ayaa aad u qashuucsanaa, waxaana ka muuqatay muxubada ay u hayaan nabiga (SCW).
Ugu dambayntii waxaa lagu soo khatimay cunto aad u macaan ood arkaysid sida dadku ay ula dhacsanaayeen macaankeeda. Waana mid sanad walba lagu soo tala galo in dadka cunto macaan lasiiyo.
Rabi haynoo dambi dhaafo inaga iyo waaridkeenba iyo umada muslimiinta ah oo dhan